Duet: Jiri iPad gị dika nyocha ọzọ | Martech Zone
Duet: Jiri iPad gi dika ihe nlere anya
Mgbe ọ bụla ọzọ, ị na-achọpụta ụfọdụ ngwa dị ịtụnanya ị na-eche maka otu ị si eme. Anọ m na-arụ ọrụ na ton na ndị ahịa na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mba ahụ, mana ọ na-esiri m ike ịrụpụta naanị otu ihuenyo. Emebiri m site n'inwe ọtụtụ ngebichi n'ọfịs m, achọrọ m ihe maka ụzọ.
A Utah ọmụmụ chọpụtara na ndị ọrụ gosiri a 44% agbam ume na arụpụtaghị maka ọrụ ederede na 29% ịrị elu maka ọrụ mpempe akwụkwọ mgbe ị na-esi n'otu ihuenyo ka a abụọ-monitor melite.
Achọpụtara m ngwa maka iPad, Duet, nke ụfọdụ ndị injinia Apple rụpụtara ma wuo ya, ọ dịkwa oke mma. Latency dị ịtụnanya, m ka nwere ike iji mmetụ ihuenyo mmetụ aka, enwere m ike ịme ka ogwe aka mmetụ na ihuenyo iPad.
A bụ ihe a gbara m remote oche na otu nke m ahịa. Ejiri m n'ime DisplayLink nkwụnye maka ileba anya na ntanetị na ntanetị, wee tinye iPad Pro m site na USB na DisplayLink. DisplayLink abụghị ngwa ngwaike achọrọ… ọ bụ naanị ihe ha nwere na ndị ahịa a.
Enwere m ike idozi ngosipụta ahụ site na iji ntọala ngosi OSX ma enwere m ike ịdọrọ na dobe gafee ihuenyo ọ bụla.
Mgbe m na-apụ, naanị m na-eweta laptọọpụ m na iPad ebe ọ bụla na ngwa mgbakwunye ebe ọ bụla m nọ. Ngwa Duet kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ abụọ ahụ, mana ntọlite ​​bụ ikuku ma ozugbo m kwụnyere site na USB ileba anya dị ndụ. Enwere m ike iji ngwa iPad ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ masịrị m.
Duet emeela ka ngwanrọ ha maka PC!
Tags: ngosi duetIhe ngosi iPadnyocha nke abuonyocha nke ato
Kedụ ka Companlọ Ọrụ Na-akwakọba Ngwakọta Ndị Ahịa Ji Jiri Nnukwu data?